Sharciga: galmada webka waa porno nool for lacagta | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Sharciga Galmada webka
Dokumentar ku saabsan BBC 3 oo loo yaqaan 'Webcam Boys' ayaa lagu baahiyay Febraayo 2016 oo ku saabsan miisaaniyadda miisaaniyadda ah, warshadaha caalamka ee caalamiga ah. Waxay raacday Nolosha 4-da casriga ah ee ku dhex nool UK. Webcaming waa meesha shakhsiyaadka gaarka ah ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo jinsi ah, galmo galmo ah iyada oo loo marayo kamarad kombiyuutar si loogu bixiyo macaamiisha. Waa sida qoaal oo leh casriga ah laakiin cabbir weyn. Tani waa wakhti yar oo ka mid ah wershadaha luuqada. Waxaa loo maleynayaa in ay kudhow yihiin 100,000 maleeshiyooyinka webcam ee UK oo keli ah.
Moodooyinka lagu sawiray dokumiintiyadu waxay u tixgeliyaan sida hab fudud oo lacag loo fududeyn karo, fal galmo oo kaliya ama saaxiibo ay samaynayaan mar walba, laakin hadda waa mushahar si ay u qanciyaan macaamiishooda noocyada kala duwan ee dareenka iyo dareenka.
Dhammaan moodooyinka waxay u dhaqmeen sida ganacsi. Sida ugu badan ee la ogaado, macaamiisha si degdeg ah ayay u caajiseen falalka gawaarida caadiga ah ee gawaarida oo waxay doonayeen wax cusub oo kicin kara. Taas macnaheedu waxa weeye in macaamiisha ay ku faraxsan yihiin 'moodooyinka' inay isku dayaan inay dadka cusub ku qoraan ganacsiga ama waxay sameeyaan ficilo ficil ah oo badan si ay u ilaaliyaan macaamiisha iyagoo bixinaya.
Sida laga soo xigtay wargeyska haweenka ee 2014, qaar ka mid ah haweenka da 'yarta' waxay sameeyaan 'ragga' webkamyada sidoo kale waxay soo celiyaan hadiyado ay weydiisteen adoo adeegsanaya liiska Amazon. Waa xargo jilicsan. Dad badan ayaa ku xiran lacagta oo waxay ku dhaqmayaan dabeecadahooda inkastoo ay ku xadgubaan qiimaha akhlaaqdooda ama kuwa ka mid ah xubnaha qoyskooda. Qaar badan ma u maleynayaan inay tahay qaab jidhka dhilleysiga ah.
Mid ka mid ah qaabka dukumintiga ayaa ugu dambeyntii gaadhay xaddiga uu isku dayayay inuu ku farxo macaamiisha dalbaday oo badan oo dalbaday, isla markaana go'aansadeen inuu hantidiisa hantida u iibiyo warshadaha amniga.
Haddii qofku keeno wax miisaan ama dalabaad ah, maandooriyeha internetka ee loo yaqaan 'pornography internet' waa arrin wax ku ool ah oo ku saabsan shidaalkan.
Khubarada jariimooyinka khaaska ah ayaa raadinayay dadka isticmaalaya lacag siinta qoysaska saboolka ah ee wadamada saboolka ah ee ku khasbaaya caruurta yaryar inay sameeyaan falal galmo jinsi ah iyada oo loo marayo webcam loogu talagalay deeqda galmada ee macaamiisha dibadda.
Tusaale dhowaan ah oo aad u xoogan ayaa ahaa mid farsamo Trevor Monk kuwaas oo filim ku riday gabdho yar yar oo reer Filibiin ah waxaana lagu xiray 19-sano iyo bar. Trevor Monk ayaa sidoo kale ku bixisay £ 15,000 si ay u daawadaan galmada caruurta ee Manila ee kuyaal kamaradiisu.
Booliisku waxay heleen wax ka badan sawirada 80,000 iyo 1,750 fiidiyoow fiidiyow ah oo carruur ah oo lagu soo weeraray gurigiisa Maarso 2015. Wuxuu qirtay inuu haysto iyo samaynta sawirro aan habooneyn oo carruur ah, kufsi cunug ka yar 13 iyo inuu ku dhiirri geliyo ilmo inuu ku lug yeesho ficil galmo.
Mid ka mid ah gabdhaha uu ku xadgudbay ayaa jirtay sideed sano jir waxaana laga dhex helay sawir cunug yar oo saddex sano jir ah. Xaakimka Anuja Dhir ayaa ku tilmaamay sawirada inay yihiin "sawiro naxdin leh oo caruur aad u yar yar lagu xadgudbay laguna bahdilay qaabka ugu xun".
<< Warshadaha Porn